အမေရိကန်-ရုရှား လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲ သံတမန်ရေးရာ ရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာ မရဘဲ ပြီးဆုံး - Xinhua News Agency
ဂျီနီဗာ ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံအကြား လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲအသစ်တစ်ခုသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့၌ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ညနေပိုင်းက မည်သည့် သံတမန်ရေးရာ သဘောတူညီမှု ရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာ မရဘဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်း အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား “ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သံခင်းတမန်ခင်းဟာ ရုရှားနဲ့ ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေမှုကို လျှော့ချဖို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်” ရုရှားဘက်ကမူ အမေရိကန်-ရုရှားဆွေးနွေးမှုတွင် “ လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ” အဖြစ် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန် နှင့် ရုရှားသမ္မတဗလာတီမာပူတင်တို့ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ Villa La Grange ဝင်းအပြင်ဘက်တွင် လုံခြုံရေးအတားအဆီးများ ထူထပ်စွာချထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၅ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား မဟာဗျူဟာ တည်ငြိမ်ရေးဆွေးနွေးမှုကဲ့သို့ပင် အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wendy Sherman က ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ရုရှားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Ryabkov က ဦးဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အချို့ ထိရှနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှင်းလင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ ခက်ခဲတယ်၊ ကြာမြင့်တယ် ၊ သိပ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ် ၊ နက်နဲတယ် ၊ ခိုင်မာပါတယ် ” ဟု ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းထောက်များအားပြေားကြားရာတွင် ရုရှားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ryabkov က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရုရှားဖက်ကအဆိုပြုချက်တွေကို အမေရိကန်ဘက်က အထူးအလေးအနက်ထားပြီး နက်နက်နဲနဲလေ့လာစူးစမ်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သီးခြားပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sherman က “ ဂျီနီဗာမြို့က အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာ ၈ နာရီနီးပါးကြာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ကွေ့ဝိုက်မနေဘဲ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လက ဂျီနီဗာမြို့မှာ သမ္မတဘိုင်ဒန် နဲ့ သမ္မတ ပူတင်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း သုံးကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်-ရုရှား မဟာဗျူဟာတည်ငြိမ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
မြောက်အတ္တလန္တိတ်သဘောတူစာချုပ်အဖွဲ့(နေတိုး) အနေဖြင့် အရှေ့ဘက်သို့ ထပ်မံချဲ့ထွင်ခြင်းမပြုရေးဆိုင်ရာ တရားဝင် အာမခံချက်ရန်ကို ရုရှားနိုင်ငံက မျှော်လင့်ထားသည်ဟု ဂျီနီဗာမြို့တွင်ရောက်ရှိနေသည့် ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ryabkov က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရုရှားဆန့်ကျင်ရေး အကြောက်တရားလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒတွေအပေါ် ကယောင်ကတန်းနဲ့ ဝေဝါးတဲ့ ယူဆချက်အမြင်တွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသမျှ အရာအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ အဓိက မေးခွန်းတွေကတော့ လေထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေဆဲပါပဲ ၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်က စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ရစေလောက်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ဖို့ အမေရိကန်ဘက်က နားလည်မှုတစ်ခုရသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မမြင်မိပါဘူး” ဟု ဆွေးနွေးပွဲအပြီး Ryabkov က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျွန်တော်တို့ မယုံကြည်ပါဘူး ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ သံထည်လို ခိုင်မာတဲ့ ၊ ရေစိုခံနိုင်တဲ့ ၊ ကျည်ကာခံနိုင်တဲ့ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်ထားတဲ့ တရားဝင်အာမခံချက်မျိုးကိုပဲ လိုချင်တာပါ ။ အာမခံတာတွေ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတာတွေ မလိုချင်ပါဘူး ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ယူကရိန်းအားတိုက်ခိုက်ရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း နှင့် ယူကရိန်းနှင့်အတူ တင်းမာမှုတစ်ခုမြင့်တက်လာမည်ကို စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းကို အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၎င်းက ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည် Ryabkov က ဆိုသည်။
“ အချို့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဒါမှမဟုတ် သတိပေးမှုတွေ ထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယူကရိန်းကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး “ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုတင်းမာမှု အခင်းအကျင်းမျိုးကိုမှ စိုးရိမ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားထောင်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်များကို မျှဝေရန် တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံက တက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း Sherman က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေ နဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်ငြိမ်ရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အပြန်အလှန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့အတူ ကျွန်မတို့ ဒီကိုလာခဲ့ကြတာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်သံတမန်က အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နေတိုး၏ “ တံခါးဖွင့်မူဝါဒ” ကို ရပ်တံ့ပစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၊ အမေရိကန်နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စွန့်လွှတ်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ယူကရိန်းပါခြင်း – မပါခြင်း ၊ ဥရောပပါခြင်း -မပါခြင်း သို့မဟုတ် နေတိုး ပါခြင်း- မပါခြင်း စသည့်အချက်များအပေါ် ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်း ကဆိုသည်။
“အကယ်၍ ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်လာမယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားပေးဆပ်ရမှာဖြစ်သလို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က သူတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကို သူတို့ခံစားရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ ရုရှားအနေနဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ” ဟု သူ(မ) က ဆိုသည်။
ယင်းနှစ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပို၍အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုရှားအရာရှိများနှင့်အတူ မကြာခင်ကာလအတွင်း နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သွားရန် အမေရိကန်က ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တနင်္လာနေ့က ရုရှားအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် Sherman သည် နေတိုးခေါင်းဆောင်များ ၊ နေတိုးမဟာမိတ်များ နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအရာရှိများနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် မှ ၁၂ ရက်အထိ ဘရက်စ်ဆဲလ်မြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျီနီဗာရှိ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
GENEVA, Jan. 10 (Xinhua) — A new round of security talks between the United States and Russia concluded Monday evening in Geneva without yielding any diplomatic breakthrough.
While the U.S. side called the latest talks between the two major global powers “our diplomacy in pursuit ofade-escalation with Russia,” the Russian side called the talks U.S.-Russia “security guarantees negotiations.”
“The talks were difficult, long, very professional, deep, concrete, without attempts to gloss over some sharp edges,” Ryabkov toldapress briefing after the talks. “We had the feeling that the American side took the Russian proposals very seriously and studied them deeply.”
Sherman toldaseparate press briefing after the talks that “We hadafrank and forthright discussion over the course of nearly eight hours at the U.S. Mission in Geneva. This is the third time the U.S.-Russia Strategic Stability Dialogue has convened since President Biden and President Putin met in Geneva last June.”
“It should dismantle everything it has created while driven by anti-Russia phobias and delusional perceptions about our country’s policies since 1997,” he was cited as saying.
Ryabkov told reporters after the talks that “the main questions are still up in the air, and we don’t see an understanding from the American side of the necessity ofadecision inaway that satisfies us.”
“We do not trust the other side,” he stated. “We need ironclad, waterproof, bulletproof, legally binding guarantees – not assurances, not safeguards.”
Sherman told reporters that the United States came to Monday’s meeting to hear Russia’s security concerns and to share its own, “We came withanumber of ideas where our two countries could take reciprocal actions that would be in our security interests and improve strategic stability.”
The senior U.S. diplomat said that the U.S. will not stop NATO’s “Open Door” policy, it will not forego bilateral cooperation with sovereign states that wish to work with the United States, and it will not make decisions about Ukraine without Ukraine, about Europe without Europe, or about NATO without NATO.
According to the U.S. mission in Geneva, after Monday’s talks with the Russian officials, Sherman will then travel to Brussels on Jan. 11 to 12 for further consultations with NATO leadership, NATO allies, and EU officials.
Photos- Photo taken on June 15, 2021 shows fences with barbed wires are seen outside the Villa La Grange, the venue forasummit in Geneva, Switzerland, between U.S. President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin.(Xinhua/Guo Chen)